Avy any Nosy Be, nampandalovina tetsy Ivato: fonosana “héroïne” 317 g saika haondrana any Etazonia | NewsMada
Nampiahiahy ny mpiasan’ny ladoany ny entana iray, avy any Nosy Be, nampandalovina tetsy amin’ny biraon’ny ladoany Mamory Ivato, ary saika halefa any Hamilton Bermuda, Etazonia. Taorian’ny fizahana, hita tao ny fonosana zava-mahadomelina, “héroïne” milanja 317 grama.
Saron’ny ladoany eny Mamory Ivato, ny 7 marsa 2019 teo, ny fonosan’entana nahitana “héroïne” milanja 317 grama. Raha ny fampitam-baovao avy eo anivon’ny ladoany, niainga avy any Nosy Be ity fonosan’entana nahitana “héroïne” ity ka nampandalovina tao amin’ny ladoany, mialoha ny saika handefasana azy any Hamilton Bermuda, Etazonia. Ny fanaraha-maso sy ny fisavana nataon’ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny ladoany no nahatonga ny ahiahin’izy ireo tamin’ity entana ity.
Voasoratra tamin’ilay fonosan’entana ny marika ”Série P”, marika famantarana ny entana mbola hamidy. Rehefa noborahana ilay fonosana, hita tao karazana T-Shirt, kojakoja amihafa, firavaka… akanjo sy kojakoja madinika ny ao anatiny. Rehefa nidirana lalindalina anefa ny fizahana, hita tao ny fonosana iray nasiana ilay zava-mahadomelina, izay misy ny adiresin’olona iray any Etazonia. Hita tao anatiny ny katalaogin’akanjo miaraka amina vovo-javatra mampiahiahy.
Nampandrenesina momba ny fisian’ity vovo-javatra ity ny sampandraharaha miady amin’ny zava-mahadomelina eo anivon’ny ladoany ka tonga nanao fizahana ity fonosan’entana ity. Fantatra, taorian’ny fitsirihana nataon’izy ireo, fa vovoka “héroïne” milanja 317 g ny tao anatin’ity fonosana kely iray fanampiny ity. Manana ny fitaovana fitsirihana ireny “héroïne” ireny rahateo ny eo anivon’ny ladoany ka tsy nanano sarotra ny fitsirihana izany.
Misy ny fiaraha-miasa amin’ny ladoany any Amerika…
Mitohy, araka izany, ny fanadihadiana ataon’ny sampandraharaha misahana ny ady amin’ny fanaovana trafikana zava-mahadomelina eo anivon’ny ladoany sy ny fikarohana izay olona nandefa ity entana ity niainga avy any Nosy Be. Nilaza ihany koa ny eo anivon’ny ladoany fa hisy ny fiaraha-miasa amin’ny ladoany amerikanina CBP (Customs and Border Protection) hikarohana ny olona handefasana ity zava-mahadomelina ity any Etazonia. Andrasana ny tohin’ny fanadihadiana ity trafikana zava-mahadomelina ity.
Tsy vao izao ny nahitana trangana trafikana zava-mahadomelina toy izao mandalo eto amintsika. Misy ny gaboraraka sy/na firaisana tsikombakomba? Firifiry ireo teratany afrikanina mpanao trafika “héroïne” tratra teto amin’ny amintsika. Gaboraraka ny fanaraha-maso ny fivezivezen’ny entana sy ireo vahiny miditra eto amintsika? Firifiry koa ireo teratany malagasy mpanao trafikana zava-mahadomelina tratra any Maorisy. Eto amintsika, tsikaritra fa goragora ny fampiharan-dalàna sy ny fanaovana lalana ambanin’ny tany hany ka efa any anaty fiaramanidina mihitsy aza vao tratra ny sokatra.